Qorshaha Waxqabadka Eskişehir ee lagula dagaallamayo Fayras Corona | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirQorshaha Waxqabadka Eskişehir ee La Dagaalanka Fayras Corona
24 / 03 / 2020 26 Eskisehir, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY, taraamka
Qorshaha waxqabadka Eskisehir si loola dagaallamo fayraska corona
Corona virus dillaacay bilowgii March la bilowga u noqon wax ku ool ah ee dunida in diyaariyey Plan Action si virus Corona Eskişehir degmada Metropolitan Dagaalamo, virus la qorsheeyay tallaabooyin qaadi doonaa boodboodi Turkiga. Iyada oo la qaadayo tillaabooyin farabadan marka loo eego baaxadda qorshaynta, Dawlada Hoose ee Magaalooyinka waxay sii wadaysaa hirgelinta tillaabooyinka si adag loo qaatay.
Dowladda Hoose ee Magaaladda, oo ahmiyad weyn u leh caafimaadka guud, waxay qaadatay tilaabooyin badan oo muhiim ah qaab dhismeedka waxqabadka ee ay dejisay si looga hortago faafidda cudurka. Xaaladda guud, marka hore, tababaro war bixin ah ayaa la siiyay shaqaalaha dawlada hoose ee Covid-19, halka tirada shaqaalaha loo yareeyay ugu badnaan qaab adeeg aan carqaladeyn doonin.
Matxafka iyo xarumaha waa la xirey, waxbarashadiina waa la joojiyay
Matxafka Yılmaz Büyükerşen Waxyaabaha wax lagu qoro, Matki Eseşehir Museum, Matxafka Arts Glass, Matxafka Taariikhda Live iyo Matxafka Xusuusta Magaalada ayaa si ku-meelgaar ah loogu xiray booqdayaasha, halka Dhismaha Tale Castle, Xarunta tijaabada sayniska iyo Sabancı Space House iyo Zoo sidoo kale yihiin ujeedo taxaddar leh hawshan. ma aqbalo dadka soo booqda.
Tababar siinta kumanaan kun oo dad ah oo ku sugan qeybo kala duwan, ESMEK ayaa sidoo kale si ku meelgaar ah u hakisay waxbarashadda hawshan.
Muhiimadda weyn waxay ku dhegsan tahay jeermiska jeermiska
Dawladda Hoose ee Magaalada, taas oo ahmiyad weyn u leh ka-hortagga wasakhda meelaha joogsiga ah iyo xafiisyada tigidhada, gaar ahaan taraamyada iyo basaska, waxay ku fuliyaan jeermis ku daaweyn gawaadhi gawaadhi ah kumanaan qof maalin walba, marka laga reebo nadiifinta joogtada ah. Intaa waxaa u dheer, iyada oo la aasaasey kooxaha wareega, gawaarida waa la jeermiyay iyada oo la sugayo waqtiyada bixitaanku joogsiga ugu dambeeya ee taraamyada iyo basaska inta lagu jiro maalinta.
Marka laga reebo gaadiidka dadweynaha, kooxaha Caasimadaha Magaalada, oo sidoo kale ka shaqeeya meelaha xiran, oo ay badanaa isticmaalaan muwaadiniinta, oo ay ku jiraan boosteejooyinka basaska, waxay si joogto ah u baabi'iyaan meelaha xiran sida Dhirta Biyaha ee Kalabak, Warshadda rootida Dadweynaha, Waxsoosaarka Qashinka Qufulka leh iyo Xarunta Wareejinta.
In kasta oo alaabta guryaha ee magaalooyinka ay si joogto ah u isticmaalaan muwaadiniinta ku sugan kooxda halista cudurka faafa ayaa had iyo jeer dawo la siiyaa, kooxaha fadhiyada ayaa sidoo kale laga saaraa iyadoo ay ugu wacan tahay tillaabooyinka laga qaaday baaxadda la dagaallanka 'Covid-19'.
Gaadiidka dadweynaha oo bilaash ah xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka
Dowlada Hoose ee Magaalada, oo aan iloobin shaqaalaha caafimadka ee ka shaqeeya dadaalka halganka guud ee ka dhanka ah cudurka faafa, waxay shaacisay in shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo farmashiistayaasha ka shaqeeya dadweynaha iyo kuwa gaar ahaaneedba ay ka faa iideysan karaan taraafikada iyo basaska magaalada lacag la’aan. "Had iyo jeer waxaan kula joognaa halgankayaga guud!" farriin baa lasiiyay.
Intaa waxa u dheer, iyada oo ay hoos u dhacday tirada rakaabkii 80%, diyaarinno ayaa loo sameeyay taraamyada iyo basaska.
Biyaha kuwa isticmaalaya mitirka farsamada lama joojiyo
Isagoo ku dhawaaqaya in dadka deegaanka Eskişehir ee adeegsada mitirka farsamada gacanta ee cabirka corona-ka aan la jabin doonin ilaa May 1, 2020, ESKİ waxay sidoo kale u sameysay kooxo mobilo oo loogu talagalay muwaadiniinta ka weyn 65 sano ee naafada ah oo aan u isticmaalin mitir farsamo. Hadday muwaadiniintu soo wacayaan 185 oo ay soo sheegaan cinwaankooda, kooxdu waxay aadaan albaabkooda waxayna kudayaan 10 mitir oo mitir oo biyo ah hore.
"Waxaad si badbaado leh u cuni kartaa Halk Ekmek, Halk Süt iyo Ukun Halk"
Mas’uuliyiinta Dowlada Hoose ayaa sheegay in dhamaan noocyada kala duwan ee Halk Ekmek loo daadiyay kuwa aan la taaban karin isla markaana shacabka la gaarsiiyay cabirkooda dhanka cabirka Covid-19, waxayna xuseen in muwaadiniintu ay isticmaali karaan Halk Ekmek, Halk Süt iyo Halk Egg, oo si weyn uga shaqeeyaan nadaafadda.
Iyagoo cadeeyay inay ahmiyad weyn siinayaan xeerarka nadaafadda ee ku dhow 50 dukaan oo ku yaal bartamaha magaalada, mas'uuliyiintu waxay cadeeyeen inay muwaadiniinta ka sugayaan makhaayadaha rootiga dadweynaha inay ka helaan cuntada aasaasiga ah ee ay soo saaraan gacanta ku haynta injineerada cuntada.
Booliisku uma ogolaanayaan fursadayaasha inay indhaha kala furaan.
Kooxaha booliiska, oo aan u oggolaan kuwa fursad siiya inay kordhiyaan qiimaha cuntada, gaar ahaan alaabada caafimaadka iyagoo u rogaya mashaqada inay helaan fursado, waxay baaritaano wada jir ah la sameeyaan mas'uuliyiinta Agaasinka Ganacsiga ee Gobollada. Kooxahan, oo qiimeeya cabashooyinka gaar ahaan marka loo eego qiimaha ku kordhinaya khibradaha nadaafadda iyo jeermis-dileyaasha, ayaa uga digaya iibiyayaashu in ay ka digayaan kor u kaca qiimaha xad-dhaafka ah inta lagu gudajiro baaritaankooda.
Intaa waxa u dheer, iyada oo bandowga loo xadiday muwaaddiniinta ka weyn 65, dhammaan kooxaha booliisku waxay ku dhawaaqaan oo ay digniin ka bixiyaan meelaha ay muwadiniintu ku urursan yihiin magaalada oo dhan.
Xayawaanka qalloocsan midkoodna lama illoobo
Iyada oo la xidhayo maqaayadaha iyo kafateeriyada u adeegta baahiyaha xoolaha xoolaha jidadka, Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay sidoo kale kordhisay taageeradeeda cunno ee xayawaanka darbi jiifka ah. Kooxaha la aasaasay, bisadaha iyo eeyaha waxaa lagu quudiyaa cunto qallalan magaalada oo dhan. Howlaha lagu fuliyay hal-ku-dhigga 'Guriga joog, naftiina dariiqyada ayaa nalagu aaminay' ayay u mahadcelinayaan muwaadiniinta jecel xayawaannada.
Muwaadiniinta waxaa loo ogeysiiyaa siyaabo kala duwan
Dawlada hoose ee magaalada, oo umada ku wargalinaysa muwaadiniinta wax kuqoran laba luqo, raket, waraaqo iyo xaashiyo, gaar ahaan xisaabaadka warbaahinta bulshada, ee ku saabsan Covid-19, waxay si joogto ah ugu yeeraysaa muwaadiniinta inay gurigooda joogaan. In kasta oo ay muwaadiniintu u gudbinayaan codsiyadooda iyo cabashadooda oo dhan Dawladda Hoose ee Magaaladda iyada oo loo sii marinayo warbaahinta bulshada, waxay sidoo kale lacagtooda ku bixin karaan degmada internetka.